Cleanbuild.africa na -ekwupụta mgbanwe aha ya na Climateaction.africa
Nsonaazụ ebum n'uche dị mkpa bụ ịnọchite anya na ịkwado ndị na -enweghị olu, ọkachasị obodo na -enweghị nchekwa nke mgbanwe ihu igwe na -emetụta nke ukwuu, si otú a na -ahụ na ikpe ziri ezi ihu igwe maka mmadụ niile.
Climateaction.africa ga-elekwasị anya ntụzịaka ya na ebumnobi ya ịgụnye ọhụụ Afrocentric nke ijikọ ụmụ amaala Afrịka, ndị na-eme iwu, ndị nwere oke dị iche iche, ndị na-emepụta ihe dị ọcha, obodo na otu dị iche iche gafee vetikal na-elekwasị anya ihu igwe ma ọ bụ iji jikọọ ozi na ibe ya, gafee curated. gburugburu dijitalụ na nke mmadụ.
Atụmatụ a na -agbanwe agbanwe ga -enyere aka n'ịkọwapụta na ịsụgharị nsogbu zuru ụwa ọnụ ka ọ bụrụ ihe ịma aka nwere ike ịchọta na mpaghara Afrịka niile ma hụ na ndị Afrịka ghọtara ihe mgbanwe ihu igwe sitere na ọnọdụ Afrịka karịa echiche ọdịda anyanwụ.
Climateaction.africa na-ezube iwulite Afrịka enyi na enyi, na-adigide site na imekọ ihe ọnụ dị mma yana ịtọlite ​​gburugburu ebe obibi na-eme ka atụmatụ na ihe ọhụrụ na-aga nke ọma.
Ebe nlebara anya dị mkpa gụnyere:
Ịmata ihu igwe na ịkwado
Ịmepụta na ngwangwa Ngwọta
Climateaction.africa ga -aga n'ihu na -arụkọ ọrụ na ndị mmekọ na ndị na -emekọ ihe ọnụ iji mepụta ngwọta ụmụ amaala nke enwere ike itinye n'ọrụ ngwa ngwa, dị ọnụ ala ma rụpụta nsonaazụ ngwa ngwa maka kọntinent Africa.
Ọ dị mkpa ka ndị Afrịka bụrụ akụkụ nke mkparịta ụka niile metụtara ihu igwe nke ga-ahụ na ịkwụwa aka ọtọ, ikpe ziri ezi na ịha nhatanha maka mmadụ niile na ihu igwe.africa dị njikere ịbụ ebe ikpo ọkụ maka ndị Afrịka niile.
Ndị mmekọ Facebook Comic Republic, na -ebupụta #NoFalseNewsZone Comic Book
Ngwaọrụ njikwa kacha mma maka mbido
Nyochaa: Ozi teknụzụ mmalite na Africa
Flubot: NCC dọrọ ndị ahịa ekwentị aka na ntị na Malware ọhụrụ
Kọmitii Iwu mmalite SA na -ezute Ramaphosa
Ọdịda nke Ride-hailing maka ndị ọkwọ ụgbọ ala Naijiria